en:Korean red pine (Pinus densiflora), North Korea
See List of Pinus species for complete taxonomy to species level. See en:list of pines by region for list of species by geographic distribution.
ထင်းရှူး (အင်္ဂလိပ်: Pine) မျိုးရင်း၏ ရုက္ခဗေဒ အမည်မှာ ပိုင်နေစီအီး Pinaceae ဖြစ်ပြီး မျိုးစိပ်ပေါင်း ၁၁၅ မျိုးရှိသည်။ ထင်းရှုးမျိုးရင်းဝင်အပင်တို့သည် ကတော့ပုံ အသီးသီးသော အမြဲစိမ်း အပင်များဖြစ်ကြသည်။ ထိုမျိုးရင်းတွင်ပိုင်း၊ လာ့ချ၊ စပရု၊ ဆီဒါ၊ ဖား၊ ယူး၊ ကွန်နီဖားပင်တို့ပါဝင်ကြ သည်။ ပိုင်းထင်းရှုး၌ မျိုးစိတ်အလွန်များသည်။ မျိုးစိတ်ပေါင်း ၇ဝ ခန့်ကို အမျိုးအစားနား ခွဲခြားပြီးဖြစ်သည်။ ပိုင်းထင်းရှူးသည် ကမ္ဘာမြောက်ဘက်လုံးခြမ်း တစ်ခုလုံးလိုလို၌ အနှံ့အပြားပေါက် ရောက်သည်။ အာရှတိုက်၊ ဥရောပတိုက်နှင့် အမေရိကတိုက်တို့ တွင်လည်း ပိုင်းထင်းရှူးပင် အများအပြား ပေါက်ရောက်သည်။ ပိုင်းထင်းရှူးပင်တို့သည် ပေအနည်းငယ်သာမြင့်သော အပင်များ မှာ ပေ ၂၃ဝ သို့မဟုတ် ထိုမျှမကမြင့်သော အပင်များထိရှိ သည်။ ပိုင်းထင်းရှူး၏ပင်စည်မှာ ဖြောင့်သည်။ အခြားအပင် များနှင့် အနည်းအကျဉ်းရောနှော၍ ထင်းရှူးတောကြီး ဖြစ်သည်အထိ မြောက်မြားစွာ ပေါက်နေိုင်သည်။ ပိုင်းထင်းရှူး၌ အပ်ပုံသဏ္ဌာန် အမြဲစိမ်းအရွက်များ ရှိသည်။ အသီးသည် ကတော့ပုံဖြစ်သည်။ အသီးများသည် သီးပြီးသည်မှ ၂ နှစ် သို့ မဟုတ် ၃ နှစ်ကြာမှ မှည့်ကြသည်။ အသီးအရှည်မှာ ၁ လက်မမှ ၁၈ လက်မထိရှိသည်။ အရွက်များသည် တစ်လက်မ သာသာမှ တစ်ပေကျော်ထိ ရှိနိုင်သည်။ မျိုးစိတ်ကိုလိုက်၍ အရွက် ၂ ရွက်မှ ၅ ရွက်အထိ စု၍ထွက်ကြသည်။ အရွက်၏ အရင်းပိုင်းတွင် ဖွဲကြမ်းကဲ့သို့သော အခွံပါးဖြင့် ဖုံးအုပ်လျက် ရှိသည်။ အသီးများသည် တွဲလျားကျ၍ သီးပြီးလျှင်၊ အသားများသော အကြေးခွံများသည် ထိပ်ပိုင်းတွင် ကတော့ပုံကဲ့သို့ ချွန်၍နေသည်။
ယူးထင်းရှူးကို ကျောက်ထင်းရှူးဟူ၍ သိကြ၏။ ထိုထင်းရှူးပင်သည် ကြီးထွားရာ၌ ကြန့်ကြာသော်လည်း အလွန်အသက်ရှည်သည်။ အင်္ဂလန်ပြည်တွင် နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝဝ ခန့် အသက်ရှည်၍ လုံးပတ် ပေ ၃ဝ ခန့်ရှိသော ယူးထင်းရှူးပင်များ ယခုတိုင်ရှိသေးသည်။ ယူးထင်းရှူးပင်၏ အသားကို အထူးသဖြင့် လေးကိုင်းပြုလုပ်ကြသည်။ ယူးထင်းရှူးအသားမှာ ကျစ်လျစ်၍ နီကြန့်ကြန့်အရောင်ရှိ၏။ အရောင်တင်လိုက်လျှင် အလွန်တောက်ပပြောင်လက်လာ၍၊ အိမ်သုံးပရိဘောဂများ ပြုလုပ်ရန် အထူးကောင်းမွန်သည်။ ယူးထင်းရှူးပင်များကို အင်္ဂလန်ပြည်ရှိ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဝင်းများအတွင်း၌ စိုက်ပျိုးထားသည် ကို တွေ့ရသည်။ အရွက်များမှာ ပြားချပ်၍၊ အလျား ၁/၂ လက်မမှ ၃/၄လက်မခန့်အထိရှည်၏။ အရွက်၏အောက် ဘက်သည် အစိမ်းနုရောင်ဖြစ်သည်။ ထိုအရွက်များတွင် အဆိပ် ရှိ၏။ အသီးမှာ ထင်းရှူးသီးမျိုးနှင့် လုံးဝမတူချေ။ ရိုးရိုးသစ်သီးများနှင့် ပုံသဏ္ဌာန်တူ၍ အလယ်တွင် အစေ့တစ်ခုသာ ရှိသည်။ ထိုအစေ့မှာလည်း အဆိပ်ရှိသည်။ ယူးထင်းရှူးပင်များသည် နွေကူးဥတုဦးတွင် အပွင့်ငယ်ကလေးများ ပွင့်လေ့ ရှိကြသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထင်းရှူး&oldid=716152" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။